Stranger Things 3: Eleven ၏အင်အားသည် Demogorgon နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ - သူစိမ်းများ
Stranger Things 3: Eleven ရဲ့အင်အားဟာ Demogorgon နဲ့ဆက်စပ်နေသလား။
Stranger Things3Are Eleven S Powers Connected Demogorgon
သူစိမ်း - ချေးငွေ - Netflix
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် Fuller House ရာသီ4ဒီဗီဒီသို့လာခြင်း The Handmaid's Tale: Hulu က The Testaments ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်
Stranger Things3ရဲ့အဆုံးမှာ Eleven ရဲ့အင်အားကရပ်တန့်သွားပြီး Demogorgon ပေါ်လာတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလား။
Stranger အရာ3အတွက်ရှေ့ဆက်လုယူသောသူ!
အဆံုးမှာ လူစိမ်း 3, Netflix ၏မူရင်းစီးရီးတွင်အင်အားအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင် Eleven သည်သူမအင်အားကုန်ဆုံးပြီးနောက်ယခုအချိန်အထိစီးရီး၏အကြီးမားဆုံးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။
bates မိုတယ်ရာသီ5netflix အပေါ်လာပါဘူး
မြင်ကွင်းမှာ Eleven ကသူမရဲ့ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ သုံးလကြာထိုညဥ့် Starcourt Mall မှာလွန်ပြီပေမယ့် Eleven ရဲ့အင်အားကြီးရာသီ၏အဆုံးအားဖြင့်ပြန်လာကြပြီမဟုတ်။
ငါသူတို့ကွာသွားဘာကြောင့် Eleven ရဲ့အင်အားကြီးတွေအများကြီးစဉ်းစားခဲ့ကြရတယ်, ဤရှည်လျားသောချိုးပြီးနောက်သူမသူတို့ကိုသို့အသာပုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ရှင်းနေသည်မှာသူမစွမ်းအားများသည်လုံးဝမသွားပါ။ သူမသူတို့ကိုသုံးရန်ကြိုးစားသည့်အခါဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုရှိသော်လည်း၊ သူတို့သည်အားနည်းနေသည်။ သူမသည်တစ်ချိန်ကသူတတ်နိုင်သမျှအခြေခံကျသောအရာများကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ၊
ဖတ်ပါStranger အရာများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလွှတ်ပေးရန်5ရက် 4
သိသာထင်ရှားတဲ့လူအတော်များများကသူမကသူမချက်ချင်း Hopper နေရာချထားမနိုင်သေချာစေရန်ကြံစည်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတင်ထင်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ပေမယ့်ငါအဲဒီလိုမထင်ကြဘူး။ Duffer Brothers သည်သူတို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သတင်းအချက်အလက်အစအနများကိုသာထုတ်လွှင့်ခြင်း၏သခင်ဖြစ်သည်။ ဤပြပွဲသည်အလွန်အောင်မြင်သောအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ Eleven ရဲ့အင်အားကြီးပျောက်ကွယ်သွားအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကိုသီအိုရီရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မီဤသီအိုရီသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာငါခဏအကြာကနေငါဖတ်တဲ့သီအိုရီအပေါ်အခြေခံသည် Reddit အသုံးပြုသူ Peter45 နှင့် Vulture ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ကြောင်းသီအိုရီကိုရှင်းပြ။
Eleven နှင့် Demogorgon ဆက်သွယ်မှု
ဤသီအိုရီသည်ရာသီဥတု (၁) အထိပြန်သွားနိုင်ပြီးရာသီအလိုက်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုမူကား, ငါတို့ကြောင်းအမှတ်အတိတ်နှစ်ခုရာသီနေနှင့်ငါနေဆဲကအားလုံးကိုချိတ်ဆက်ပုံကိုမမြင်နိုင်ပါ။ သီအိုရီကအခြေခံအားဖြင့်ရာသီဥတု ၁ မှ Eleven နှင့် Demogorgon တို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေသည်ဟုနိဂုံးချုပ်သည်။ ဒါဟာ Eleven ဟာ Will နဲ့ Barb ရဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုသူမမတိုင်ခင်သိထားပုံပါပဲ။
သီအိုရီကိုရှင်းပြရန် Vulture ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
အဲဒီမှာဒီမှာဖြည်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအတတျနိုငျဆုံးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Demogorgon နှင့်ဤဆက်နွယ်မှုကြောင့် Eleven သည်နဂါးနှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်နွယ်သည်ဟုယုံကြည်သူများစွာရှိသည်။
ဗွီဒီယိုသည် Stranger Things မှဆွဲဆောင်သောနေရာများမှဆက်သွယ်မှုအနည်းငယ်ကိုထောက်ပြသည်။ In အကျဉ်းထောင်နှင့်နဂါး, Demogorgon တွင်ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့်သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်နှစ် ဦး ရှိသည်။ X-Men ရုပ်ပြများတွင် Jean Grey သည် Phoenix နှင့် Dark Phoenix နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစက်များကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည် Eleven သည်ဆက်သွယ်မှုအချို့၏တစ်ဝက်ခန့်မှန်းထားသည်ထက်ဝက်ခန့်ရှိသည်။ Demogorgon သည်မကောင်းသောတစ်ဝက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ချက်များကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မလျှင်ငါမသိရ။ ဒီသီအိုရီကိုထောက်ခံတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အခု Demogorgon နဲ့ Eleven အကြားဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်။ ဤသီအိုရီကထိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကူညီသည်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာ ၄ ရာသီပိုစတာသည်အဘိုး၏နာရီ (ပန်ကာအနုပညာ) ဖြင့်အချိန်ခရီးသွားခြင်းကိုကန့်ကွက်သည်။
Stranger Things4ရာသီအသစ်ထွက်ရှိသည့်ရာသီ - အသစ်သောရာသီရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Stranger Things ရာသီ4သည် ၂၀၂၁ မေလတွင် Netflix သို့မလာပါ
Stranger အရာ၏ Millie Bobby ဘရောင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်၌အံ့’s ခြင်းရဲ့က Black မုဆိုးမဖြစ်ပါတယ်
Netflix က Stranger Things ရာသီ4ကို 2021 ခုနှစ်တွင်မလာသည်ကိုအတည်ပြုသလား
ဘယ်လို Eleven က Mike ရဲ့အိမျမှပုံ၌ Will အသိအမှတ်မပြုသနည်း နဂါးကသူ့ကိုအပေါ်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကိုသူမမည်သို့သိသနည်း။ သူမအပေါ်ဇောက်ထိုးရှာဖွေခြင်းမပြုမီ Barb သည်သေသွားကြောင်းမည်သို့သိသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် Eleven ကျောင်းရှိသူမ၏နောက်ဆုံးမြင်ကွင်း၌နဂါးနှင့်အတူပြိုကွဲသလဲ?
နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းမှာတော့ Eleven ဟာနဂါးပျောက်ကွယ်သွားစေတဲ့အခါမှာတော့ Monster က Eleven လုပ်နေတဲ့တူညီတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Eleven ဟာသူမအပေါ်က chalkboard ကိုဆန့်နေပါတယ်။ ရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Eleven နှင့် Demogorgon အကြားထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုခုကိုသဘောတူနိုင်သည်။
ဘယ်လိုက Eleven ရဲ့အင်အားကြီးမှပြောပြတယ်
ဒီတော့ဒီဆွေးနွေးမှု၏ဘို့အလိုငှါ, ရဲ့ရုံ Eleven နှင့် Demogorgon တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းယူဆကြကုန်အံ့။ ကြောင်း၏အဆုံးမှာ Eleven ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေအင်အားကြီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် လူစိမ်း ၃?
hulu အဆိုပါ simpsons ရှိသည်ပါဘူး
Erica နှင့် Dustin တို့သည်ရုရှားအခြေစိုက်စခန်းမှထွက်ပြေးနေစဉ် Demogorgon အတွက်ကြီးမားသောလှောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ interdimensional beast ကိုနာကျင်စေသည့်အရာအချို့နှင့်အတူဖြစ်သည်။ Erica သည်ထိုအရာကိုခိုးယူပြီး၎င်းသည်ရော်ဘင်နှင့်စတိဗ်တို့ကိုအခမဲ့ကူညီရန်အသုံးပြုသည်။
အကယ်၍ တတိယရာသီဖြစ်သည့်ပရမ်းပတာဖြစ်လျှင်ရုရှားများသည် THE Demogorgon ကိုရှာဖွေ။ Upside Down မပိတ်ခင်ရုရှားသို့ယူဆောင်လာခဲ့လျှင်ကော။ ထို့နောက် Eleven နှင့် Demogorgon ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ Demogorgon သည် Eleven ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အချို့ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ခိုးယူနိုင်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သူမ၏အင်အားကြီးရုရှားနှင့်ဟော့ကင်းအကြားအကွာအဝေး၏လျော့နည်းသွားဖြစ်လာ?
သူတို့အားလုံးအပြီးချိတ်ဆက်လျှင်ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူးဘာလို့ငါမမြင်မိပါဘူး။ ယခုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် Flayer လည်းရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ ဤရောနှောခြင်းထဲသို့ပစ်ချနိုင်သည်။
အခန်း (၆) တွင်မည်သည်နည်း3, Eleven သည်ပျက်ပြယ်ကို သုံး၍ Billy သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Mind Flayer သူမ၏အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်နှင့် Billy Eleven ရဲ့လက်မောင်းကိုဖမ်းပြီး။ ဤသည် Eleven ချွတ်ပစ်, သူသည်အခြေခံအားဖြင့် Billy ရဲ့အမှတ်တရများသို့ကျရောက်ပါတယ်။ သူမသည်ဤအခိုက်အတန့်အားမိမိ၏အားသာချက်အဖြစ်အသုံးချနိုင်သော်လည်း Mind Flayer ကသူမနှင့်ဆန့်ကျင်။ ၎င်းသည်သူမ၏စိတ်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း:15 Stranger အမှုအရာပြီးနောက်ကြီးမားသောမေးခွန်းများကို 3
သူမ Billy ၏အမှတ်တရများကိုမြင်နိုင်သည်အတိုင်း, Mind Flayer ထို့နောက်သူမ၏အမှတ်တရများကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါမြင်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ တစ်နည်းနည်းနဲ့မြင်ကွင်းပြောင်းလဲသွားပြီး Billy က Hopper ရဲ့အခန်းထဲမှာသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရင် Mind Flayer ဟာ Eleven ရဲ့ psyche ဒါမှမဟုတ်သူမရဲ့အတိတ်က Demogorgon ရဲ့အခြားအပိုင်းကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။
Mind Flayer သည် Upside Down နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် Mind Flayer သည် Demogorgon ကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ၊ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကို၎င်း၏အားသာချက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်ဤနည်းကိုစဉ်းစားပါကဟော့ကင်းသူရဲကောင်းများသည် Eleven ကို ၀ င်ရောက်ပြီးသူမ၏ကြင်နာမှုနှင့်လူသားဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပြသခဲ့ပြီးထိုသတ္တဝါများကိုတိုက်ခိုက်ရန်သူ့ကိုကူညီခွင့်ပေးခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, သူမကလိုလိုလားလားသူတို့အဘို့ထိုသို့ပြု။
ထိုနည်းတူစွာပင် Mind Flayer သည် Anti-Eleven ဖြစ်လာရန် Demogorgon ကိုသုံးနိုင်သည်။
Eleven နဲ့ Demogorgon တို့ဟာအလားတူနည်းလမ်းတွေနဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Eleven ကအရာရာကိုသူမစိတ်ထဲထည့်နိုင်ပြီး Demogorgon လည်းလုပ်နိုင်သည်။ ပထမဇာတ်လမ်းတွင် Byers အိမ်သို့တံခါးကိုသော့ဖွင့်သောအခါမှတ်မိပါသလား။ Demogorgon ကတကယ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတောအုပ်ထဲမှာ Nancy နဲ့ Jonathan ကနေသမင်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်တူညီသောစွမ်းအားကိုဆွဲယူပါကထိုစွမ်းအားကိုအသုံးပြုခြင်းမှတားဆီးနေသောအရာတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိမည်လော
ဒီအသံဘယ်လောက်များများကိုလိုက်ရှာတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ရာသီဥတု ၁ တွင် Eleven နှင့် Demogorgon အကြားဆက်နွယ်မှုနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအဆုံးသတ် Demogorgon ပြန်ရောက်လာသည့် Eleven ၏အင်အားကြီးမားသောပျောက်ကွယ်သွားမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောရှင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီသီအိုရီဟာအဆုံးသတ်မှာပေါ်လာတဲ့ Demogorgon ဟာကြီးမားတဲ့ယူဆချက်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတယ်3ပထမဆုံးရာသီမှာ Demogorgon ဖြစ်ရမယ်။ ကျနော်တို့သေချာဘို့မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ Eleven သည်ရာသီ ၁ တွင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးအသက်ဆက်ရှင်နေပါက Demogorgon သည်ဆက်လက်ရှင်သန်နေ ဦး မည်ဟုဆိုလိုသည်။
စိတ်ရောဂါ၏ရာသီ3ရှိရလိမ့်မည်
စီးရီးကဒီနေရာကနေဘယ်မှာငါမသိပေမယ့်ငါကနောက်ဆုံးမှာသူပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုပြသသောအရာကိုနှင့်ပတ်သက်။ အရေးကြီးသောမေးခွန်းများကို, အ Upside Down အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပိုပြီးစတင်ဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းတာပါ!
ဒါကကျနော်တို့သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် သူစိမ်း4! အစီရင်ခံစာများအရရာသီသစ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်စတင်သော်လည်း၎င်းကို Netflix ကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။
အကြောင်းပိုမိုသတင်းများအတွက်ညှိနေပါ လူစိမ်း 4!
နောက်တစ်ခု:15 သူစိမ်းအရာများအတွက်ရဲရင့်ဟောကိန်းများ 4
starz အပေါ် outlander လေထုမရသောအခါ
netflix မီးခိုးရောင်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 14
ကြယ်တစ်စင်း 2018 စီးမွေးဖွားသည်
ရာဇပလ္လင်ရာသီ 1 Netflix ၏ဂိမ်း
ဦး တ ဦး တည်းပွဲစဉ်ဖြစ်ကြသည်